प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आजदेखि आईपिओ शेयर खुल्यो,अनलाइबाट कसरि भर्ने ? - Tamang Online
याम्बु – प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मङ्सिर २९ गते (आज)देखि सर्बसाधारणलाई आईपिओ निष्काशन बिक्रि खुला गरेको छ । कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गरेको हो । ६० लाख कित्ता मध्ये ३ लाख कित्ता कम्पनीको कर्मचारीको लागि छुट्याईएको छ भने ३ लाख कित्ता नै सामुहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ ।
बाँकि रहेको ५४ लाख कित्तामा सर्बसाधारणले आवेदन दिन पाउने छन् । लगानीकर्ताले आवेदन दिँदा न्युनतम १० कित्ता र अधिकतम ५ हजार कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आईपिओमा छिटोमा मङ्सिर २ गतेसम्म र सो अवधिसम्म पर्याप्त आवेदन नपरेमा ढिलोमा पुस १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ । कम्पनीको बिक्रि प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ ।
लगानीकर्ताले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, नक्साल, काठमाडौं, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कमलादी, काठमाडौँ तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि(आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरो शेयर एप र मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आईपीओ कसरि भर्ने ?
आइपिओ भर्नाको लागि डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ | डिम्याट खाता खोल्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खुलेको हुनुपर्दछ | यदि जो कसैको बैंकमा खाता खोलेको छैन भने डिम्याट खाता खोल्न सकिदैन | डिम्याट खाता खोलि सकेपछी मेरो शेयरको आई पासवोर्ड लिनुपर्छ | साथै आफ्नो बैंक खाता भएको बैंकमा सम्पर्क राखी सिआरएन नम्बर अनिवार्य लिनुपर्छ |
डिम्याट भनेको के हो ?
डिम्याट भनेको कागजी रूपमा रहेको भौतिक सेयर प्रमाणपत्रहरुलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राख्ने कार्य हो । अर्थात भौतिक रूपमा भएका सेयर प्रमाणपत्रलाई अभौतिक( इलेक्ट्रोनिकीकरण) गर्ने प्रक्रिया हो ।
सेयर बजारमा प्रचलनमा रहेको कागजी प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउन र व्यवस्थित गर्न सेयर प्रमाणपत्रलाई डिम्याट गरिन्छ । डिम्याटको सुरुवातले सेयर कारोबार छिटोछरितो गर्न सघाएको छ । सेयरको अभौतिकीरणले सेयर प्रमाणपत्र बोकेर हिँडने, च्यातिने, बिग्रने, हराउने जस्ता समस्याबाट लगानीकर्ताले मुक्ति पाएका छन् ।
डिम्याट खाता अनुमतिप्राप्त कुनै पनि सदस्य कहाँ खोल्न सकिन्छ । खाता खोल्न पहिला नै कुनै प्रकारको सेयर हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । सेयर हुने र नहुने सबैले यो खाता खोल्न सक्छ्न् । डिम्याट खाता खोल्न खाता खोल्ने सम्बन्धित लगानीकर्ताको तीन पुस्ते विवरणसहित नागरिकताको फोटोकपि, फोटो आवश्यक हुन्छ |
परिवारको सबै जनाको डिम्याट खाता खोलेर आईपीओ पर्ने संभवान धेरै हुन्छ |
« इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया पुसदेखि सुरू गरिदै (Previous News)
(Next News) इजरायलमा नेपाली राजदुत शाक्य ‘डिप्लोमेटअफ दी इयर’बाट सम्मानित,कामदार पठाउन प्रोटोकल स्वीकृत »